Ukugxeka | UThomas Brezing kunye noVera Klute, 'Isizungu sokuba liJamani' | Iphepha leendaba laBagcisa abaBonakalayo kwi-Intanethi
Ikhaya » kakhulu » Ukugxeka | UThomas Brezing kunye noVera Klute, 'Isizungu sokuba liJamani'
Ukugxeka | UThomas Brezing kunye noVera Klute, 'Isizungu sokuba liJamani'
Igalari yeSixeko iLimerick yobugcisa, nge-9 kaJulayi-nge-12 kaSeptemba
IVera Klute, iFrizz, i-2020, ioyile kwilinen; yonke imifanekiso nguStudioworks Photography, ngoncedo lwabazobi kunye neLimerick City Gallery of Art.
Umboniso wabantu ababini yenziwe njengengxoxo phakathi kwamagcisa uVera Klute kunye noThomas Brezing kunye neepivots ezijikeleze isincoko sika-2004 esithi, 'Isizungu sokuba liJamani', ngumbhali wenoveli waseIreland, uHugo Hamilton, ekwabonelela ngesihloko somboniso. Kule ncoko, iHamilton idibanisa unxibelelwano nobuzwe njengoko ichaphazela isazisi. Udibanisa ubundlobongela obunamandla kunye netyala kuluntu lwaseJamani kwaye ajonge indlela yokwala kunye neemvakalelo zokufuduka, ukulangazelela kunye nokuchonga 'ubuqu', njengoko bunxibelelene nomhlaba, zichazwe ngamava eIreland.
Abazobi bobabini bazalwe ngesiJamani kwaye ngoku bahlala ixesha elide eIreland, ngezenzo zokubekwa kunye nokufuduswa kwabo banikezela izingqisho ezibalaseleyo kuyo yonke imisebenzi yobugcisa. U-Brezing uzibiza njengomntu othinjelwe e-Ireland, kwaye esiya kwindawo yokufuduka. Ngelixa uKlute, endaweni yokuchonga imeko yokufuduka okanye uvakalelo oluthile lwesizungu, uchaza imeko yokuba wedwa ayifumana kumava akhe amabini. Esi sithuba sedwa esivumela umgama wakhe ukuba ucacise iingcinga zakhe, uvumela ukuqhelana nobuntwana ukuba busebenze njengesiqhulo se-nostalgia, ngakumbi kwimifanekiso yakhe kunye nemizobo epeyintiweyo. Oku kubekwa liminal kwe 'self' kunxibelelana bobabini la magcisa kwimeko yawo ethandabuzekayo okanye yexeshana ehlala kuzo zombini ezi nkcubeko.
Ukungena kulo mboniso, umntu ubuliswa kuqala yimizobo emibini emikhulu, imisebenzi yemidiya exubeneyo, kunye nemiboniso yokuma komhlaba, eyandisa ubude bodonga lweatrium ngohlobo lwepeyinti kaVera Klute, Frizz. Kodwa kungenxa yesihloko somsebenzi wobugcisa kaKlute, Ukubeka iingcambu, ukuba ithoni yomboniso icwangcisiwe, ibandakanya ukuqonda kwesazisi esivela ekuhloleni i-zeitgeist yenkcubeko, kunye nohlobo lokuthabatheka kokuhlala ngokwengqondo ngokudibeneyo kumazwe amabini ahlukeneyo.
Kwigalari yeAnte, isandi esivela kwividiyo yeKlute, Iwa phantsi, ibeka isithuba kwisithuba, idale imeko enesingqi esinomtsalane. Umboniso wevidiyo kwi-vignette yemizuzu emithathu kwaye uphathwa ngokwenziwa ngumculi njengokongezwa kwepeyinti. Izinto eziwayo zibonakaliswe ziphazamisa imbonakalo yomhlaba, amanqanaba omhlaba oveziweyo abonisa ubume bejoloji, nganye kuzo iyinto yexesha elibonakalayo, ivuliwe kwaye iphazanyiswa kukuphindwaphindwa kwezinto eziwe phezulu. Amathambo afakwe ngaphakathi atyhutyha phakathi kweengqimba, ngokuthe chu esiya kumphezulu; isandi sisebenza njengesixhobo sokuhamba, njengoko isiqwenga sakha, siqhekeza, kwaye siphambuka kwakhona.
Ividiyo ibekwe kufutshane nofakelo olubunjiweyo olungenaludwe luhle nguBrezing, owenziwe kwiibhola zombhoxo ezifakiwe. Isihloko Kuya kubakho ukucula ebumnyameni, inemizimba yesikhumba exhonywe, yokuphumla, kunye nokulinda kwindawo yomnyango, ukubulisa umzimba wombukeli. Ukufakwa kwesibini komfanekiso oqingqiweyo kaBrezing, onelungelo Amanani awadibanisiIbekwe kwikona yegalari yasemazantsi yaseCavernous. Xa beqwalaselwa ngokwemigaqo yabo, imisebenzi eqingqiweyo iqala ukwenza imvakalelo yexesha lokudlula kwisindululo sabo sokujikeleza; hypnotically uziva ukuba imizimba iyazenzela. Iinqanawa ezibhijelweyo zilukiwe ngaphandle kweeroli ezibekiweyo, ngokunyuka kwemilinganiselo eyenza umzimba wento.
Kwigalari ephambili, imizobo emikhulu kaBrezing ixhomeke ezantsi kwaye imema umzimba ukuba usondele kufutshane ujonge le mimandla yakhiweyo. Kwi Mhlawumbi ikamva alidingi kuthi, umphezulu ongagungqiyo kunye nembonakalo yeempawu ezichaziweyo, ezitsaliweyo zaza zacinywa ngebrashi, zenza ukuba amanani abonakalisiweyo ajikeleze phakathi komphezulu kunye nenkumbulo- kumda wokuqondwa kunye nesithukuthezi ngokungazichazi.
Elinye igumbi linikezelwe kulawulo lukaKlute, kunye nemisebenzi emincinci eqingqiweyo eboniswe kwiiplinths eziphantsi. Ubume besalathiso sokwenza uphawu kwiiprinta zendlela ezenziweyo nezingachazwanga. Imimandla yasemaphandleni kunye neempawu zokomfuziselo zabefundisi zisebenza njengabakhombisi bamava emveli aseJamani ukusuka ebuntwaneni bomzobi, exhasa inkcubeko kunye nelifa lakhe laseJamani.
Kuwo wonke umboniso, iimpawu eziphindaphindayo zomntu kunye nokuma komhlaba zisetyenziswa njengolwimi olubonakalayo lokuphonononga indawo egxile kwindawo. Le mephu yobudlelwane bobuqu emhlabeni ikwavakala njengempendulo engundaba-mlonyeni kubhubhane wehlabathi, nangaphezulu konyaka kuthintelo oluvalela abantu kwindawo yabo, ukudala ukubonwa kunye nokuqonda okuqinisekileyo kwimeko yethu yesiqhelo. Ukongeza, uvakalelo lwe ilizwe lakowabo - okanye 'ikhaya' njengoko liguqulela ngokukhululekileyo ukusuka kwisiJamani-lichaza imeko, nokuba ngumntu okanye ngokudibeneyo, edibana nendawo ebonakalayo. Kanjalo, ilizwe lakowabo ngumzobo ogqunywe ngesiqingatha ohlala kwindawo yawo kulo mboniso.
Umboniso uqulethe amava amaninzi achaza ifuthe lelifa kunye nobuni, indawo kunye nobuzwe. Iipateni ze-Nostalgic, zejografi kunye nezosapho zobomi ziboniswa njengezithunzi, zihamba zijikeleza umhlaba. Imisebenzi yobugcisa ihambisa izikhundla zamagcisa njengababukeli be-liminal abanamasiko amabini, imimandla kunye nokuchongwa-amava axhaphakileyo kodwa antsonkothileyo kubumi beli xesha.
UTheo Hynan-Ratcliffe ngumkroli, ugxeka / umbhali woyilo kunye nomphathi osungula iMiscreating Sculpture Studios, eLimerick.